♨ . Qu Te Kitchen: ငရုတ်သီးကင်မ်ချီ
မင်္ဂလာပါရှင် ဒီနေ့တော့ ငရုတ်သီးကြိုက်နှစ်သက်သူများ သဘောကျနှစ်သက်မယ့် ငရုတ်သီးကင်မ်ချီ လုပ်နည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ် အရင် လုပ်စားနေကျ ကင်မ်ချီများနည်းတူ ဆားနယ် အချဉ်သိမ့် တူတူပါပဲရှင် ငရုတ်သီးလဲ ကင်မ်ချီလုပ်စားကြသေးတဲ့ အိုက်ဒီယာလေး ရသွားပြီး ထမင်းစားမြိန်စေချင်လို့ ပြောပြလိုက်တာ ပါနော် လုံးဝ မစပ်တဲ့ ငရုတ်သီးအပွတောင့်ကြီးကို သုံးထားပါတယ် ငရုတ်ရနံ့သင်းသင်းလေးနှင့် ထမင်းစားမြိန် ပါတယ်
ငရုတ်သီးကင်မ်ချီ လုပ်ဖို့အတွက် ငရုတ်သီးအပွတောင့်များ ဒီငရုတ်အပွတောင့်များက လုံးဝ မစပ်ပါဖူး ၀က်သားကင် အမဲသားကင်များတွင် ဆလပ်ရွက်နှင်တွဲစားကြသော ငရုတ်ပွတောင့်မျိုးဖြစ်ပီး ပဲငပိအနှစ်နှင့် ဒီအတိုင်းတွဲစားလည်း စားလို့အရမ်းကောင်းပါတယ် ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ငရုတ်သီးအညှာများကို တုံးတိ မလှီးပဲ အညာဘတ်မှ အသားနည်းနည်းလေး ပိုလှီးပစ်ပါမယ် အညာဘတ်က အသားပိုလှီးထားတဲ့အတွက် အစေ့ထုတ်ရတာလွယ်ကူစေပါတယ် ပြီးလျှင် ယ္ခုလို လက်နှင့်ဖိပြီး စင့်နှီတုံးပေါ်မှာ လိမ်ဖယ် လိမ်ဖယ် လုပ်လိုက်ပါ :D
အစေ့များထွက်လာရင် ငရုတ်သီးတောင့် ဘယ် ညာ လက်ဖြင့်ညှပ်ခြေလိုက်ရင် ငရုတ်စေ့များ ပြုတ်ကျလာပါမယ် Qt ငရုတ်သီးကိုင်လိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မို့ အဆင်ပြေသလို ပြောပြထားတာပါ လက်နှစ်ဖက်နှင့် ပွတ်ခြေလိုက်ပီး ဓါးနဲ့ အလယ်က တချက်ခွဲလိုက်ရင် အစေ့များထွက်ပြီး ဘေးသားအဖြူအနည်းငယ်သာ ကျန်ပါတော့တယ် ကျန်နေတဲ့ ဘေးသားများကို ထမင်းစားဇွန်းနှင့်ခြစ်ထုတ်လိုက်ပါ အစေ့ထုတ် ဘေးသားများခြစ်ပြီးရင် ငရုတ်သီးများကို ဆားနှင့်နယ်ပြီး နာရီဝက်လောက် စိမ်ထားပါ့မယ် ( နာရီဝက်ဆားနယ်ပြီးလျှင် ငရုတ်သီးများကို ရေ ဆေးပြီး စစ်ထားပါ)
ငရုတ်သီးဆားရေစိမ်ထားတုန်း လိုအပ်တဲ့ အဆာပလာလေးတွေ လုပ်ထားဖို့အတွက် ...မုန်လာဥဖြူ ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ ကျို့ဆိုင် မုန်လာဥနီ အနည်းငယ်တို့ လိုအပ်ပါတယ် အသီးအရွက်များကို ယခုလို နုတ်နုတ်စင်းထားပါ ကျို့ဆိုင် အစား ကြက်သွန်မြိတ်လည်း သုံးလို့ရပါတယ် လိုအပ်တဲ့ အရသာများကတော့ ငရုတ်သီးမှုန့် ၂ဇွန်း၊ သကြား အနည်းငယ်၊ ငါးငံပြာရည် ၁ ဇွန်း၊ ပုဇွန်ဆားငံ ၁ ဇွန်း နှင့် ကော်ရည် ရှလကာရည် နှမ်းဆီမွှေး နှမ်းအနည်းငယ်တို့ လိုအပ်ပါတယ် အရသာများကို သမအောင်နယ်ပြီး ငရုတ်သီးတောင့်ထဲကို အစာသွတ်ပါ
အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပီ ယခု လုပ် ယခုစားလို့ရတဲ့ ငရုတ်သီးကင်မ်ချီကို စားမကုန်လို့ ကျန်နေသေးရင်လဲ ရေခဲသေတ္တာထည့် တခြားကင်မ်ချီများလိုပဲ ကြာလေစားကောင်းလေးပါပဲ ငရုတ်သီး ကင်မ်ချီကို ယ္ခုလို လုပ်စားကြသလို ငံပြာရည်အနောက်နှင့် စိမ်ပြီး နှပ်စားကြတာမျိုးလဲရှိပါတယ် ငရုတ်သီးမပါရင် မစားတက်သူများနှင့် ငရုတ်သီးကြိုက်နှစ်သက်သူများ (ငရုတ်သီးအစပ်မစားနိုင်သူများ) ထမင်းမိန်စေမယ့် ငရုတ်သီးကင်မ်ချီကို လုပ်စားရတာလဲလွယ်သလို အားလုံးလဲ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့လဲ ထင်ပါတယ်ရှင်
Mar Mar Lwin7 June 2012 10:17မစပ်ဘူးဆိုပေမဲ့ငရုတ်သီးဆိုတဲ့နာမည်ကရှိနေတော့ နဲနဲတော့လန့်သားဒါပေမဲ့မြည်းတော့မြည်းသွားပါတယ်ReplyDeleteReplies^V^8 June 2012 16:45လုံးဝ လုံးဝ မစပ်ဖူး တီတီမာ ... ဒီမှာ ခလေး သေးသေးလေးတွေတောင်စားနိုင်တယ်DeleteReplyစံပယ်ချို7 June 2012 14:37လုပ်ပြထားတာတော့တကယ်ကိုစားချင်စရာပါပဲလုပ်ရင်လက်ဝင်မလားပဲ စားချင်ရင်တော့လုပ်ရမှာပဲလေတနေ့နေ့တော့ စမ်းဦးမယ်ReplyDeleteReplies^V^8 June 2012 16:46လက်မ၀င်ပါဖူး မကြီးဂျက်ရဲ့... ကျူတီ လုပ်တာ မိနစ် ၂၀ လောက်ပဲကြာပါတယ် :)DeleteReplykhin7 June 2012 15:02ကြည်.ရုံနဲ.တင် စားချင်နေပြီReplyDeleteReplies^V^8 June 2012 16:47မမကျား ငရုတ်သီးကြိုက်တယ် ထင်တယ် ..ကျူတီလည်းအဲလိုပဲ ထမင်းစားရင် အစပ်မပါရင် မစားတက်ဖူး :)DeleteReplyMonmon Yoko8 June 2012 01:32အစားအသောက်ပို.စ် ဆုိုတာနဲ. တန်းပီးလာလည်ပါတယ်။ အစေ.ထုတ်ထားရင် မစပ်ပေမဲ. အစေ.မထုတ်ဘဲစားဖူးတယ်။စပ်တယ်။ဓာတ်ပုံတွေလဲလှ။ နည်းလဲရသွားလို. တစ်နေ.စမ်းကြည်.ပါဦးမယ်။ReplyDeleteReplies^V^8 June 2012 16:49တန်းပီ အလည်လာတယ်ဆိုလို့ :) ကျေးဇူးပါ မွန် အစေ့ထုတ်ထားရင်လုံးဝ မစပ်ပါဖူး မစပ်တဲ့ငရုတ်ပွကို သုံးရင် ပိုကောင်းပါတယ်DeleteReplyမီးမီးငယ်8 June 2012 05:04My lovely daughter in law...why today your blog didn't accept my Burmese language!!!!!or something wrong with my computer!!!I like your chilly...:)))ReplyDeleteReplies^V^8 June 2012 16:51ဘယ်ရမလဲ မာမီ...မနေ့က ကလိနေတာ ဟိဟိ .. ဒီနေ့တော့ ရပါပီ .မနေ့က ကလိလိုက်တာ ကိုယ်တွေ လက်တွေနာသွားပီ ဟိဟိDeleteReplyAnonymous8 June 2012 15:02လက်တွေနဲ့ ဖိထားတာလက်တွေမပူနေဘူးလား။စားချင်တယ်။း)အိုင်အိုရာReplyDeleteReplies^V^8 June 2012 16:53အဲဒီ့ ငရုတ်သီးမျိုးကလေ လက်ဝါးပေါ်တင်လိုက်ရင် လက်ဖနောင့်ကနေ လက်ဖျားလောက်ထိ ရှည်တယ် မမရေ....... အဲဒီ့ငရုတ်သီးကို ထမင်းကြော်တွေထဲမှာ အစေ့ထုတ်ပြီး ကြော်စားတယ် ..နောက် ဗုံလုံသီးအစာသွတ်လိုမျိုး အစာသွတ် နှပ်စားတယ် :)DeleteReplyမြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe)8 June 2012 17:24စိတ်ဝင်စားစရာ နည်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ညီမလေးရေ..အခုမှရောက်ဖူးပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေ အများကြီး တွေ့လိုက်တယ်။ နောက်လည်း လာလည်ဦးမယ်။ခင်မင်စွာဖြင့်မြတ်ပန်းနွယ်ReplyDelete^V^8 June 2012 18:18စိတ်ဝင်စားစရာတွေတွေ့တယ်ဆိုလို့ ပင်ပန်းခံရကျိုးနပ်သွားတာပဲ ... :P ခဏခဏ အလည်လာလို့ရတယ် စိတ်မဆိုးတက်ဖူး သိလား :PReplyDeletesan htun9 June 2012 10:46ဘာချက်စားရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေရတာ..သိပြီ ငရုတ်သီးကင်ချီ လုပ်စားမယ်...ReplyDeleteAdd commentLoad more...
မနေ့က ညနေစာအဖြစ် လုပ်စားဖြစ်တဲ့ ပဲပြား ရေညှိ အရံဟင်းလေးပါ။ ခံတွင်းမြိန်သလို သတ်သတ်လွတ်လည်းဖြစ်တာမို့ စားလို့သိပ်ကောင်း...
ချစ်သော မိတ်ဆွေများ အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ကင်မ်ချီ အမျိုးအစားပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် လူကြိုက်များဆုံး ကင်မ်ချီ ၁၀ မျိုးမှာ ...
ဘလော့ဒေးမှတ်တရ ပုဇွန်ခွက်ကြော် ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ကြော်မယ် ကြော်မယ် နဲ့ မကြော်ဖြစ်သေးတဲ့ ပုဇွန်ခွက်ကြော် ဘလော့ဒေး အမှတ်တရ ကြော်...
၀က်ရိုးစွပ်ပြုတ် (ပျော့ဒါဂွီ ဟဲဂျမ်းဂု - Ppyeodagwi Haejang Guk - 뼈다귀 해장국­)
ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့ချက်ပြမယ့် ဟင်းက ၀က်ရိုးကို မုန်ညှင်း ပဲငပိနဲ့ချက်ထားတဲ့ ၀က်ရိုးစွပ် (ပျော့ဒ...
အညာဘူးချဉ် နှင့် ဘူးချဉ်ကြော်
ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ အညာသူ အညာသားမှန်ရင် ဘူးချဉ် ဇောင်ငြမ်းချဉ် ကြော်ချက်ဟင်းများကို နှစ်သက်ခုံမင်စွာစာ...
Angry Gran Run v1.6.0.1 Mod Free Shopping Apk 24MB
Sai Nyi @ New Style Magazine
ကျွန်တော့ အတွေ့အကြုံများ ၂
Orlando, Florida ခရီး..
ပြင်ဦးလွင် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ၂၀၁၃
New Stuff I'm loving and Blog Updates ^_^
Wembley stadium andatrain